musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Global Tourism Film Festival inotanga muna Gumiguru 21
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Global Tourism Firimu Mutambo unovhura muna Gumiguru 21
GTFF, yepasirose-yekutanga yekufamba-famba Tourism Tourism Festival inogadzirwa kuitirwa mukutsigira nzvimbo dzekushanya uye hupfumi hwenzvimbo hunotarisana nekushanya.
GTFF inogadzirwa neCanada uye US yekushanya uye vatungamiriri vemafirimu.
GTFF inoziva vekunze vagadziri vemafirimu uye odhiyo-inoonekwa zvigadzirwa izvo zvinonyanya kusangana uye kufambira mberi kwepasirese kuziva.
Chikamu chemubhadharo weGTFF chichagovaniswa nenheyo dzinoshanda dzakagadzirira kutsigira zviga zvekushanya zvinogara zviripo.
Mutambo weGlobal Tourism Firimu (GTFF) chiitiko chinotyisa cheMafirimu chinopa mafirimu ane simba rekusimudzira kuziva nezvekukosha kwenzvimbo dzinoitwa mukubudirira kwe cinema neterevhizheni. GTFF, yepasirose-yekutanga yekufamba-famba Tourism Tourism Festival inogadzirwa kuitirwa mukutsigira nzvimbo dzekushanya uye hupfumi hwenzvimbo hunotarisana nekushanya.
GTFF inoziva vekunze vagadziri vemafirimu uye odhiyo-yekuona zvigadzirwa izvo zvinonyanya kusangana uye kufambira mberi kwepasirese kuziva kwekuenda. Inotungamirwa nesimba rekutumwa rine simba, zviitiko zveGTFF zvinosanganisira mafirimu indasitiri mashopu pamwe nemasemina ekuongorora kushanya kwakasimba; kukurudzira vateereri kutora chiito chekuchengetedza.
Iyo 2021 GTFF Virtual Edition inogadzirwa mukubatana uye kutsigirwa kweNetherlands Tourism.
Iyo Mission yeGlobal Tourism Firimu Mutambo ndeiyi:
Kubvuma nekupa mubairo vane tarenda vagadziri vemafirimu.
Kuendesa mafirimu eruzhinji uye zvigadzirwa nezvevashanyi nzvimbo uye zvigadzirwa.
Kusimudzira zvazvino kuitika mukushanya kwemafirimu kugadzira.
Kutenderedza kufarira kwebhizinesi revashanyi nemakambani ekugadzira akananga zvigadzirwa zvemufirimu.
Kukurudzira vashandi vemaindasitiri emafirimu kuti vatendeudzire uye vagadzirise mukugadzira mafirimu.
Kutora kutariswa kwemakambani anogadzira mafirimu, midhiya, kushanya, uye veruzhinji kuchikuva chimwe chete.
Kugadzira mamiriro ezvinhu epamusoro ekushambadzira zvemukati.
GTFF inogadzirwa neveCanada neUS yekushanya uye vatungamiriri vemaindasitiri emafirimu vane mukurumbira wakaratidzwa muFirimu neKushanya kusanganisira kugadzwa kumakomisheni anotonga emufirimu nekushanya.
Kubva pamitambo yepasirese kusvika kumhemberero dzemitambo, kubva pakuvhenekwa kusvika kumabhizimusi ane zvibereko, kubva kumakwikwi anotyisa anotungamirwa nevatongi vepasi rese, kune vakurukuri vehurukuro, mikana yekuzadzisa zvido zvevatori vechikamu kuti vanzwisise zvirinani uye kuve chikamu chetsika yekupedzisira mukugadzira mabhaisikopo akawanda.
Veruzhinji, vemafirimu uye vezvekushanya vaizowanawo ruzivo rwekutanga uye ruzivo kubva kuzviremera zvepasi rose zvekushanyirwa neruzivo rwekuenda kwakabatana neema cinema nefirimu.
Pamusoro peMutambo Firimu Sarudzo, 2021 GTFF inopa mukana wekudzika-kwemahara emahara emabhizimusi masemina uye mashopu akaunzwa nemaindasitiri gurus. Masemina evagadziri vemafirimu anosanganisira kukwidza mari yezvigadzirwa, firimu kushambadzira, kugovera uye kukanda zvakakosha. Dzidziso dzekudzidzisa dzinofukidza kugadzirwa kwemafirimu, kunyora screen uye kuita kwe-kamera kunowanikwa munharaunda yemafirimu. Kwokuenda misangano neNetherlands uye Uganda Tourism Boards yaizotungamira nekuvhara zviitiko zveruzivo.